'मेरो सपनाको हिंडने विश्वकोष'
हात फतक्क गलिरहेको रहेछ । लौन के भएछ मेरो हातलाई भनी यसो आँखा उघारेको, हातमा कसैले धेरै पाना भएको मोटो विश्वकोष थमाइदिएको रहेछ । एकछिन त अलमल परेँ कसले राखिदिएछ भनी । म सोचिरहेको पनि थिएँ, यसलाई उघारौंकी यत्तिकै अरु किताब थन्किइरहेका र्‍याकमा थन्काइदिऊँ !
तर, मेरै छेउमा बसेर मेरी आमा मलाई किताब खोल्ने संकेत गरिरहनु भएको रहेछ । आमाको कुरालाई काट्न सकिनँ र जुरुक्क खाटबाट उठेर थचक्क कुर्सीमा बसेर अगाडिको टेबुलमा विश्वकोष राखी नियाल्न थालेँ ।
ठूलो गाताको अघिल्लो पानामा ‘हिँड्ने विश्वकोष’ लेखिएको रहेछ । पहिला त म नाम हेर्दैमा अचम्ममा परेँ । अनि बल्ल मलाई पाना पल्टाउने उत्सुकता बढ्यो । यसो पल्टाउन खोज्दै थिएँ, बाल्यकालमा मानिस कतै ठोक्किएर निधारमा सानो खत बसेजस्तो, सानो खोपिल्टो देखेँ गातामा ।
मेरो ध्यान पुनः त्यतै मोडियो । के भएको रहेछ ? यसो कोट्याएर हेरेँ, खासै केही होइन रहेछ । विश्वकोष अलि पहिलाकै रहेछ क्यारे !
कसैले पढ्ने, बुझ्ने क्रममा कोतरियो होला भन्ठानेँ । यसो सुम्सुम्याएजस्तो गरी गातापछिको एउटा पाना पल्टाएँ । पाना निकै चमकदार थियो, मानौं, कसैले अगाडिको पूरै सेता दाँत देखाएर हाँसेजस्तो गरी टिलिक्क टल्किरहेको ।
मैले अन्कनाई अन्कनाई विश्वकोष उघारेँ । त्यो सेतो पानाले ऊर्जा थपेछ क्या हो ? म बिस्तारै अरु पाना पल्टाउन खोज्दै थिएँ । आँखा प्रकाशित मितिमा पुगेछ । अनि खुसी भएँ । मेरै जन्म महिनामा प्रकाशित भएको रहेछ ।
म पाना पल्टाउँदै, पढ्दै जाँदा दुईचार दिनमै त्यहाँभित्रको शब्द अनि त्यसको अर्थमा रमाउन थालिसकेको रहेछु ।
विश्वकोषको एक भाग पनि पल्टिएको थिएन, म आफ्नै कार्यव्यवस्तताले, जहाँ पुगेथेँ पढ्दै, त्यहीँनेर सानो कागजको टुक्रा च्निह राखी विश्वकोष बन्द गर्न बाध्य भएँ ।
ठ्याक्कै त याद छैन । यस्तै तीनचार महिनाको अन्तरालपछि फेरि विश्वकोष खोल्ने समय निकालेँ । योभन्दा अगाडि पनि प्रयास त गरेको थिएँ तर कार्यव्यस्तताले गर्दा सकेको थिइनँ । बिस्तारै पहिलेको चिन्ह राखेको ठाउँबाट पढ्न थालेँ ।
शब्द निकै गहकिला र भरपर्दा थिए विश्वकोष भित्र । मानौं, कतै कसैले अविश्वास गर्ने ठाउँ नै थिएन ।
कहिले विज्ञानका कुरा त कहिले धर्मका कुरा गर्दै जीवनको अनौठो भोगाई थियो त्यसमा । तिनीहरुले मलाई अचम्भित पार्दै थिए र म बढो उत्सुकताका साथ एकएक गर्दै पाना पल्टाउँदै थिएँ ।
कुनै हरफ त सामान्य लाग्थ्यो । कुनै हरफ चाहिँ ‘ए आमा, यस्तो पनि हुन्छ विश्वका मानिसहरुसँग’ भनेर एकछिन छक्कै पर्थेँ । सायद मैले जीवन धेरै नभोगिसकेकोले होला ! तर मैले बुझ्न चाहिँ राम्रैसँग बुझिरहेकी थिएँ ।
म हरेक दिनजसो समय मिलाएर पुस्तकको पानाहरु पल्टाउने कोसिस गर्थेँ र पल्टाइरहेको पनि थिएँ । एउटा शीर्षकले मेरो ध्यान अझ बढी आकर्षित गरायो । शीर्षकको नाम थियो, ‘आधुनिक विश्वको म ।’ मेरा आँखा टक्क त्यही अडिन पुगे, जहाँ लेखिएको थियो, ‘विश्व आधुनिकतामा छिरेको धेरै भइसक्यो र विश्वका सबै मानिसहरुलाई त्यही आधुनिकतामा छिर्न र बग्न प्रेरित पनि गर्छु तर म बग्न चाहन्नँ । म सिर्फ सोचमा आधुनिकता राख्न चाहिँ सक्छु । व्यवहारमा होइन ।’
मलाई यो विश्वकोषको यी लाइनले अचम्भित बनायो र धेरै बेरसम्म बुझ्ने कोसिस गरेपछि बल्ल एकछिन पछि बुझेँ । र, सोचेँ, यी लाइनहरुलाई रातो रङ्को हाइलाइटरले हाइलाइट गरी राख्छु । अनि हाइलाइटर खोज्न लागेँ । हाइलाइटर खोजुञ्जेल, हावाले अर्को पाना पल्टाई यसो ती लाइन हाइलाइटरले छुन मात्र खोजेको थिएँ, विश्वकोष अलिक पर सर्‍यो ।
म जति हाइलाइट गर्न खोज्थेँ, विश्वकोष उति टाढा हिंड्न थाल्यो र कतै पानाका बीचबाट आवाज आउन थाल्यो, म सादा नै ठिक छु । बिन्ती छ मलाई रंगीन नबनाइदिनू ।’
मलाई विश्वकोषबाट निस्किएको आवाजले थप अचम्भित बनायो । विश्वकोष हिंड्दै झ्यालनेर पुगेर मलाई चिहाइरहेको थियो । म मनमा अनेक तर्कनासहित विश्वकोष पकड्ने र त्यो भित्रकोलाइन रङ्गाउने शुरमा उसलाई पकड्ने कोसिस गर्दै दौडिरहेकी थिएँ ।
दौडने क्रममा म कतै ठेस लागेर लड्न पुगेँ । अनि झल्याँस्स ब्युझिएँ ।
यसो छेउतिर हेरेको, सँगै सुतेकी बहिनीका गोडासँग मेरा गोडा ठोक्किएर म बिउँझन पुगेछु । आँखा एक्कासि झ्यालतिर घुम्यो तर, विश्वकोष देखिनँ । एकछिन टोलाइरहेँ । यो कस्तो सपना देखेँ मैले !
बिहान नृत्यकर्म सकेर घरबाट बाहिर निस्कने क्रममा ऐना अगाडि उभिएर आफ्नो सादापनलाई रंग्याउने कोसिस गरेँ तर, सधैंझैं मेरा हात काप्न थाले र म ऐनाबाट पर भागेँ ।
यत्तिकैमा घरबाट निस्किएँ । बल्ल थाहा पाएँ, सादा विश्वकोष मेरो रातो हाइलाइटरदेखि किन पर भागेको थियो ।
यदि म आफैं सादा जीवनमा खुसी छु र हुन्छु भने, उसको पनि त आफ्नै सोचाई होला । यस्तै सोचेँ ।
‘अर्कोदिन सपनामा हिंड्ने विश्वकोष भेटिएला ? भेटियो भने माफी माग्नेछु,’ यस्तै के के सोच्दै दैनिक कर्मतर्फ लागेँ ।
दक्षिण कोरियामा एक नेपाली महिलाको मृत्यु
प्रतिष्ठानको चिकित्सक टोली दैलेख हिँड्यो
बलात्कारको आरोपमा थप दुई जना पक्राउ
एक महिलाले क्वारेन्टिनमै शिशुलाई जन्म दिइन्
१३ वर्षीया बालिकामा डेङ्गु सङ्क्रमण
गर्भवती महिलाले ४ दिनमै जितिन् कोरोना संक्रमण
२३ वर्षीया जयन्ती जाेशी मृत फेला, हत्याको आशङ्कामा तीनजना पक्राउ
आरडिटीलाई न्यूनीकरण गर्दै पिसीआर विधिलाई व्यापक बनाउन निर्देशन
अमेरिकामा हिंसा भड्कियो, नियन्त्रण गर्न सैन्य प्रहरी परिचालन
जब सचिनले एनआइसी एशिया बैंकको एटिम फुटाएर पैसा झिक्न खोज्दै थिए…